के तपाईंलाई माेबाइल फोनले निजी कुराकानी सुनिरहेकाे वा जासुसी गरिरहेकाे जस्ताे लाग्छ?
नेपाल लाइभ बुधबार, असोज २२, २०७६, १५:५३
काठमाडाै- अक्सर मानिस दाबी गर्दछन् कि जुन सामग्रीका बारेमा आफ्ना परिवार र आफन्तसँग कुराकानी गरिन्छ त्यससँग जोडिएको विज्ञापन मोबाइलमा आउँछ। केही मानिस यो पनि दाबी गर्छन् कि यस्तो हुुनुको कारण हो उनीहरूले बोकेको मोबाइल। जसले उनीहरूको निजी कुराकानी सुनिरहेको हुन्छ। एक मोबाइल सुरक्षा कम्पनीले यस कुराको खोजी गरेको थियो।
कम्पनीले ठूला सूचना प्रविधि कम्पनी हाम्रो कुराकानी सुनिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कयौं पोष्ट पढ्न पाइन्छ, जसमा आरोप लगाइएको हुन्छ कि फेसबुक र गुगलजस्ता कम्पनीहरूले उनीहरूको जासुसी गरिरहेका छन्। यस्तो कार्य उनीहरूले विज्ञापन देखाउनका लागि गरिरहेको केहीको दाबी छ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा कयौं यस्ता भिडियो भाइरल भएका थिए। जुन भिडियोमा सुरुमा मानिसहरू कुनै प्रोडक्ट्सका बारेमा कुराकानी गर्छन् र लगत्तै मोबाइलमा त्यही विज्ञापन देखिन्छ। मोबाइल सुरक्षा कम्पनी बान्डोराका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूले यसको सच्चाइ पत्ता लगाउनका लागि एक अनलाइन अध्ययन गरेका थिए।
उक्त अध्ययनमा मानिसहरूले गरेको शंका विल्कुल गलत देखिएको थियो। फोन र ऐपले कुनै पनि निजी कुराकानी सुन्न सक्दैन। अनुसन्धानकर्ताले स्यामसुङ र आइफोनलाई अनुसन्धानका लागि छानेका थिए।
यी दुई फोनलाई उनीहरूले ‘अडियो रुम’मा राखेका थिए। जहाँ ३० मिनेटसम्ममा कुकुर र बिरोलोको खानेकुराकानीसँग जोडिएको अडियो विज्ञापन बजाइयो। त्यस्तै अर्को एक सुनसान रुपमा दुई फोन राखियो।
सुरक्षा विशेषज्ञले यी फोनमा फेसबुक, इन्टाग्राम, क्रोम, स्नैपच्याट, युट्वुब र अमेजोन जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई अनुमति दिए। जसका कारण अडियो,इन्टरनेट,क्यामेरा र ग्यालरीको प्रयोग गर्न सहज होस्। यो प्रक्रियापछि अनुसन्धानकर्ताले सबै एपस्टोर र वेभपेजमा घरपालुवा जनावरसँग जोडिएको खानेकुराको विज्ञापन खोजियो।
अध्ययनपछि के नतिजा आयो ?
उनीहरूले यो प्रयोग तीनदिनसम्म गरे। एकै समयमा उक्त प्रयोग गरियो र नतिजा अडियो रुममा राखिएको फोनले घरपालुवा जनावरसँग जोडिएको खानेसँग कुनै विज्ञापन देखाएन र ब्याट्रीको डाटाको धेरै खर्च भयो।
दुवै कोठामा राखिएको फोनमा समान विज्ञापन देखायो। बोन्डेराका सिस्टम इन्जिनियर जेम्स मैक भन्छन्, ‘अध्ययनका क्रममा पाइयो कि ३० मिनेटमा जति डाटा भर्चुअल असिस्टेन्ट एपमा खर्च भयो त्यसभन्दा कम खर्च फेसबुक,युट्युब लगायतमा भयो।’ यसबाट यो एपले लगातार अडियो रेकर्ड गरेन र त्यसलाई क्याउडमा अपलोड गरिरहेको पाइएको अध्ययनमा देखियो। ‘यदि यी कम्पनीहरू हाम्रो जासुस गरिरहेका थिए भने मोबाइलको डाटा भर्चुअल असिटेन्ट ऐपको भन्दा धेरै खपत हुनुपर्ने थियो, ’उनले भने।
कम्पनीहरु के भन्छन्?
आइटी कम्पनीहरूले यी दावाहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनीहरुले कुनै पनि व्यक्तिको जासुसीका लागि माइक्रोफोन प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै आएका थिए। अघिल्लो वर्ष फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरवर्ग पनि यसमा फसेका थिए। उनले अमेरिकी संसदमा समेत यो सवाल सोधेका थिए। संसदमा जवाफ दिँदै यस्तो आरोप गलत भएको दाबी गरिएको थियो। तर, यी कम्पनीको दाबीमा मानिसहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।
अध्ययनमा एक अचम्मको निष्कर्ष आयो कि शान्त रुममा राखिएको फोनको अधिकांश एन्ड्रोड एपले ‘अडियो रुम’ को आइफोनको तुलनामा अधिक डेटा प्रयोग गरेको थियो। कम्पनीहरूले जासुसी अन्य कुनै ठाउँबाट भएको हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। अध्ययनको यो निष्कर्षले उनीहरूको भनाइलाई मद्दत गरेको छ। अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने यी कम्पनीहरूलाई आम मानिसको निजी कुराकानी सुन्न आवश्यक छैन। मोबाइल कम्पनीहरू विज्ञापन दिन अन्य वैज्ञानिक तरिका प्रयोग गरेर ग्राहकको बारेमा जान्न सक्नेछन्। लोकेसन, ब्राउजिङ, हिस्ट्री र पिक्सल्सको ट्याक गरेर यस बारेमा प्रयाप्त जानकारी पाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ।
विज्ञापन दिने कम्पनी सोसल मिडियामार्फत साथी बन्ने र उनीहरूको चाख केमा छ भन्नेबारे पत्ता लगाउन सक्ने अध्ययनमा पाइएको छ। सोटेरिन्ज दमित्रयु लन्डनको एक इन्पिरियल कलेजका मोबाइल विज्ञान एवम् सुरक्षा विशेषज्ञ हुन्। ‘हाम्रो मोबाइल कम्पनीमा देखिएको विज्ञापन यो कम्पनीसँग पहिल्यै नै जम्मा भएको हुन्छ,’ उनले भने।
पछिल्लो वर्ष जुनमा अमेरिकाका नर्थइष्टर्न युनिभर्सिटीका शोधकर्ताले दुनियाँभरको अलग अलग एन्ड्रोइड एपको स्टोरको १७ हजार मोबाइल फोनको टेष्ट गरेका थिए। यो अध्ययनबाट पनि जासुसी गरेको वा व्यक्तिको निजी कुराकानी गरेको पाइएन।